Full nkwusioru eletriki ugwu igwe | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa igwe eletrik eletrik igwe eletrik Full nkwonkwo eletrik ugwu igwe kwụ otu ebe wheel A6AH26-SM
Batrị: Batrị Lithium 36V / 48V 10Ah Zoo na etiti
Okpokoro: Aluminom Light Weight Alloy Frame
Breeki: 160 Mechanical diski breeki usoro
Taya: 26 * 1.95 inch magnesium alloy wheel
N'ihu ihu: 3W ìhè ihu na-enwu enwu na eriri USB
Full nkwonkwo eletrik ugwu igwe kwụ otu ebe wheel
Ejiri magnesium alloy integrated wheel mee ihe na nkwusioru zuru ezu eletrik igwe eletrik. Mee igwe eletriki igwe eletrik karia ejiji na ịnyagharị dị iche na igwe okwu igwe eletriki igwe. Nwee njem na-agba ịnyịnya na ngwa ngwa ma nyere gị aka ịme njem ma ọ bụ njem kwa ụbọchị.
250W / 350W / 500W n'azụ ụgbọ ala, họrọ otu nke kachasị mma maka ebe obibi gị.
36V / 48V 9AH / 10AH na-ekpuchi battey nke a na-agbanye na bọtịnụ ala nke igwe kwụ otu ebe. Ọ na-akwado ịnwepụ gị na ya.
Mmetụta ụzụ nke na-atụgharị azụ na-enyekwu ọganihu n 'ụzọ okporo ụzọ.
Ogige igwe eletriki igwe eletriki elu zuru ezu, ị nwere ike ịhụ nnukwu nnukwu ihuenyo LCD, otu breeki na elekere anya, mgbịrịgba na mkpịsị aka. Ha niile nwere ike inyere gị aka ịnweta ịgba ígwè.
E debere 160 usoro nkwụkụkụ bọtịnụ igwe na igwe eletrik. Ọ nwere ike ịkwado ụgbọ elu-igwe niile, echegbula onwe gị banyere puddles, ala apịtị na mmiri mmiri ma na-ekpo ọkụ. Ọ na-akwụsịkarị igwe kwụ otu ebe na obere ike gị.
A na-ewepụ ọkụ 3W na-enwu gbaa na ọkụ na-acha USB na igwe kwụ otu ebe. Otu na-eme hụ na anya ịnya ịnyịnya gị maka njem abalị, nke ọzọ na - akwụ nsogbu ahụ mgbe ekwentị gị na - agwụ ike eletrik.
Ejiji eletriki eletrik zuru ezu na-eji kenda 26 * 1.97 taya na magnesium alloy integrated wheel wheel.
Igwe igwe eletrik ndị ọzọ: 26 anụ ọhịa ahụ na-ekpo ọkụ ire ere igwe eletriki igwe eletriki, 48v ikike dị elu mountian ebike, nkwusi nkwanye ọkụ eletrik mtb zuru ezu, 26 inch anụ ọhịa ike taya eletriki igwe kwụ otu ebe, Omuma igwe eletriki igwe eletriki
Tags:igwe eletrik igwe ugwu eletrik eletrik
Mbụ: 48V500W igwe eletrik ugwu igwe A6AD26
Next: 29 * 2.35 anụ ọhịa eletriki nyere aka igwe kwụ otu ebe maka ndị okenye A6AH26